Momba anay - Chen Guang Biotechnology Group Co., Ltd.
Momba ny CCGB
Sehatra sy fahaizana
Loka ara-tsiansa sy teknolojia
Rafitra sy fanamarinana
Rafitry ny mpiasa
Chen Guang Biotechnology Group Co., Ltd. dia orinasa manana teknolojia avo lenta izay mifantoka amin'ny fitrandrahana ireo akora mahomby avy amin'ny zavamaniry voajanahary, mampivelatra sy mamokatra sokajy lehibe 4 misy ny vokatra 80 mahery izahay.
▷ Colour voajanahary
▷ Fanalana hena sy menaka esansiela
▷ Fandraisana avy amin'ny sakafo sy fanafody
▷ Ny menaka sy ny proteinina
Ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny sakafo, kosmetika, fanaova, zava-pisotro, fikarakarana ara-pahasalamana ary sakafo.
Ny tsenantsika lehibe dia i Eoropa, Amerika, Aostralia ary Sina, Russia, Japan, Korea ary ireo firenena hafa any Azia sy Afrika.
Orinasa lehibe mitarika eo amin'ny sehatry ny fambolena
Tompondakan'ny orinasa mpamokatra indostrialy nasehony
Orinasa teknika avo lenta
Orinasa nasionaly momba ny trosa
National Enterprise Brand Cultivation Demo Enterprise
Famaritana Benchmark an'ny fananana ara-tsaina eo amin'ny sehatry ny indostria nasionaly
Ivotoerana teknolojia nasionaly
Toeram-pikarohana momba ny postdoctoral
Chilli Processing Laboratory manan-danja ao amin'ny ministeran'ny fambolena
Laboratoara injeniera iraisan'ny firenena sy eo an-toerana
Workstation an'ny manam-pahaizana
Ivotoerana fikarohana momba ny teknolojia injeniera
Teknolojia lehibe sy indostrialy ny fitrandrahana sy ny fisarahana ny vokatra voajanahary ao Chilli
nahazo loka faharoa tamin'ny National Science and Technology Award tamin'ny 2014
Fanavaozana teknolojia lehibe sy fampiharana ny indostria fanodinana voatabia
Nahazo loka faharoa an'ny National Science and Technology Award tamin'ny 2017
Fikarohana sy famolavolana ary famokarana ary famokarana indostrialy paprika oleoresin sy oleicic capsicum
nahazo ny loka voalohany tamin'ny lokan'ny haitao sy haitao fandrosoana avy amin'ny China National Light Industrial Council tamin'ny 2011.
Fampandrosoana teknolojia manan-danja sy fampiharana ny famokarana lycopene voajanahary
nahazo ny loka voalohany tamin'ny sendikan'ny indostria maivana China tamin'ny famoronana teknika tamin'ny 2012.
Fampivoarana teknolojia manan-danja sy fananganana indostrialy ny fampiasana ankapobeny ny cottonseed
nahazo ny loka voalohany tamin'ny fandrosoan'ny siansa sy ny teknolojia Hebei faritany tamin'ny 2013
Capsicum fanaraha-maso lalina kalitao fanaraha-maso ny fikarohana ara-teknika lehibe sy ny indostrialy
nahazo loka manokana tamin'ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknolojia nasionaly tamin'ny 2013
Loka voalohany amin'ny zava-bita fanavaozana ny fanavaozana ny fanabeazam-pirenena amin'ny taona 2012
Loka ho an'ny kalitaon'ny governemanta faritany Hebei tamin'ny taona 2013
CCGB dia voamarin'ny BRC, cGMP, Laboratoara Nasionaly (CNAS), ISO9001, ISO22000, ISO14001, OHSAS18001, KOSHER, HALAL, FAMI-QS, CMS, SEDEX, fisoratana anarana an'ny FDA an'ny USA ary fanamarinana ny rafitra fitantanana fananana ara-tsaina.
Ny vokatray, nihaona tamin'ny fangatahana FAO sy WHO, ary taorian'ny ezaka nandritra ny folo taona mahery, ChenGuang tamin'ny fiankinana tamin'ny heriny manokana dia nanatsara ny satan'ny pigment Shinoa eran'izao tontolo izao, nahatonga an'i Shina ho mpitarika manerantany amin'ny famokarana paprika oleoresin. Manomboka amin'ny na inona na inona mankany amin'ny haavo iraisam-pirenena dia manohy mihatsara hatrany i Chenguang.
CCGB dia manome lanja ny olona manan-talenta. Amin'izao fotoana izao, ChenGuang Biotech izao dia manana matihanina avo lenta maherin'ny 100, ao anatin'izany ny manam-pahaizana manana vola fanampiana manokana avy amin'ny filankevi-panjakana, tetik'asa manam-pahaizana momba ny tetikasan'ny talenta zato / arivo / folo alina, manam-pahaizana avo lenta amin'ny programa 3/3/3 faritany, tanora matihanina, olona manana mari-pahaizana PhD na Master, ary manam-pahaizana manokana teknika. Anisan'ireo mpiasa rehetra, ny isan'ny mpianatra mianatra na mihoatra mihoatra ny 44%.
Ny vina fivoaran'ny CCGB: manangana tohodrano indostrialy voajanahary manerantany ary mandray anjara amin'ny fahasalamana olombelona!
Kalitao tena tsara, mitarika natiora! Vonona handray ny tanjaky ny mpiasa rehetra ny orinasa, miaraka amin'ny fanavaozana anay, manoratra lahatsoratra vaovao hanomezana anjara biriky lehibe kokoa amin'ny fampandrosoana ny toekarena sosialy sy ny fahasalaman'ny olombelona!
Jereo ity horonantsary ity raha te hahafantatra bebe kokoa momba anay
Ny tompon-trano, ny mpanjifa, ny mpamatsy ary ny mpiara-miombon'antoka, ny mpiasa ary ny fiaraha-monina dia samy mahazo tombony amin'ny fivoaran'ny orinasa ary manome tombony betsaka amin'ny tombontsoa maro. Mandritra izany fotoana izany dia hanaraka ny fotoana isika ary hahatratra ny fiaraha-miasa mandresy fandresena.
Ccgb & Mpiasa
Ccgb & mpanjifa / mpiara-miasa
Ccgb & Fiaraha-monina
Ny orinasa dia mifandray akaiky amin'ny tombontsoan'ny mpiasa tsirairay. Ireo mpiasa dia miasa mavitrika tsy amin'ny fampandrosoana ny orinasa ihany fa amin'ny ho aviny ihany koa. Manaja ny mpiasa ny orinasa, miaro ny zon'ny mpiasa sy ny tombontsoany ary manangana sehatra sahaza ny fampandrosoana ny mpiasa tsirairay avy. Ny fizotry ny fandrosoan'ny orinasa dia dingan'ny fanatsarana ny mpiasa ihany koa!
Mandritra ny fivoarana, CCGB dia miezaka ny hanana hatsarana ary manome hatrany ny mpanjifa / mpiara-miasa vokatra mihoatra ny kalitao. Ho fitsinjovana ny mpanjifa / mpiara-miombon'antoka, CCGB manaraka ny fiaraha-miasa win-win ary mahatratra ny fampandrosoana mahazatra sy mandrakizay.
Miaraka amin'ny hetsika "One Belt One Road"
Ny CCGB dia mamaly am-pahavitrihana ireo hetsika nasionaly ary mampihatra ny paikady "Agriculture Going Global";
Orinasa miorina any India sy Zambia mba hampivelatra ny tohatry ny fambolena;
Mampazoto ny fifanakalozana ara-toekarena, kolontsaina ary teknolojia iraisam-pirenena ary fiaraha-miasa;
Fanalefahana ny fahantrana indostrialy sy famelomana indray ny tontolo ambanivohitra
Amin'ny maha orinasa nasionaly fototra amin'ny indostrian'ny fambolena, CCGB mavitrika mitana andraikitra lehibe amin'ny fampisehoana;
Ao amin'ny faritanin'i Xinjiang sy Hebei, ny CCGB dia mamolavola fotodrafitrasa, manitsy ny firafitry ny fambolena eo an-toerana ary mampitombo ny vola miditra amin'ny tantsaha;
CCGB dia mitarika tantsaha 300000 hampiakatra ny karamany hatramin'ny 2 lavitrisa yuan isan-taona;
Fanomezana amin'ny fanabeazana
CCGB dia mifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana;
Nanangana "Chenguang Scholarship" izahay ary nanangana tovana fanabeazana hanohanana ireo mpianatra mahantra;
Nandritra ny taona maro, ny fanomezana natolotray ho an'ny fanabeazana dia nahatratra RMB iray tapitrisa mahery.
Fiarovana ny tontolo iainana & toekarena boribory
CCGB dia miahiahy mafy amin'ny fampiasana feno ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny enti-manana;
CCGB dia mifikitra amin'ny toekarena boribory, mampiasa ny faritra rehetra amin'ny zavamaniry hanaovana ny fitrandrahana voajanahary.
Amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny foto-kevitra sy ny fanavaozana ny teknolojia, dia takatsika ny vidin'ny "aotra" amin'ny famokarana masomboly lycopene sy voaloboka;
Amboary ny fotony voajanahary voajanahary eran'izao tontolo izao !, Mandraisa anjara amin'ny fahasalaman'ny olombelona!
Ny fitrandrahana vokatra voajanahary, miaraka amin'ny fiarovana, maintso ary ny fahasalamany, dia nanjary indostrian'ny fiposahan'ny masoandro.
Ny fotodrafitrasa tsara fototra, tontolo iainana fampandrosoana avo lenta, tombony lehibe amin'ny famokarana lafo vidy ary fikarohana sy fampandrosoana avo lenta, fahaiza-manao fanaraha-maso kalitao no fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana ny CCGB.
Ny fahombiazan'ny paprika oleoresin dia vao manomboka ny orinasanay. Mba hampifanarahana ny fiheverana ny fiainana vaovao: ny fiverenana amin'ny natiora sy ny fiheverana ny sakafo sy ny fahasalamana, dia namaritra ny fari-pahaizana manokana momba ny fampandrosoana izahay - amin'ny fampiasana bioteknolojia hiditra amin'ny sehatry ny fahasalamana ary hanolo-tena handray anjara amin'ny fahasalamana.
"Dingana telo" mampivelatra
Indostrian'ny fahasalamana lehibe
Ho an'ny fampandrosoana amin'ny ho avy, dia miasa amin'ny fametahana loharano ho an'ny dingana faha-3 amin'ny làlam-pandehanana izahay izao: Dingana 1's, loko voajanahary; Dingana faha-2, manitatra fitrandrahana akora hafa miasa; ary miorina amin'ireo tombony ireo, ny dingana faha-3 dia ny vokatra ara-tsakafo sy ny famokarana fanafody raokandro sinoa, miditra amin'ny indostrian'ny fahasalamana lehibe.
Miorina amin'ny akora avo lenta avo lenta ho an'ny vokatra voajanahary voajanahary, ny CCGB dia manitatra ny haavon'ny indostria ary manambatra ny fahombiazan'ny fitrandrahana zavamaniry hamolavolana vokatra fikarakarana ara-pahasalamana; Mampifandray tsara ny teknolojia fitrandrahana zava-maniry sy ny teôria fitsaboana nentim-paharazana sinoa izahay mba hanavaozana ny fitrandrahana fanafody sinoa ary hananganana vokatra fikarakarana ara-pahasalamana manan-kery ao an-tokantrano, fotodrafitrasa fivarotana fanafody. Izahay dia manolo-tena hanao ny vokatra fitsaboana, fanafody izay zakan'ny vahoaka.
Tena ilaina voajanahary ho an'ny fahasalaman'ny olombelona
—— Misiona CCGB
Mampiasa ny siansa sy ny haitao mandroso hatrany izahay hitrandrahana ireo singa sy essences mahomby amin'ny vokatra voajanahary, ary hitondra fiarovana bebe kokoa amin'ny fiainan'olombelona.
Manolo-tena izahay amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafontsika sy ny filan'ny fahasalaman'olombelona. Manantena izahay fa hiaro ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny serivisy tso-po sy vokatra avo lenta, hahatonga ny fiainana ho maro loko sy amin'ny fahasambarana.
★Mahatoky sy mendri-pitokisana, Miasà mafy
★Mazoto sy manavao
★Fanoloran-tena, fahamendrehana ary fifehezan-tena